Osoo hin gaafatin, Osoo hin hubatin…. - Welcome to bilisummaa
Osoo hin gaafatin, Osoo hin hubatin….
Osoo hin qoratin
Osoo keessan barin
Daftee hin dubbatin!
Dubbii qaccee qabdee
hin raabsin jarjartee
Booda ni gaabbita
gaafa dhugaa hubatte
Ta’uuf dhaba isii
irraa quban qabduu
diigamuuf kan gammaddu,
Nutis hin diigamnuu
atis humaan fiddu.
Maatii fi gandinuu
kan waliin jiraatu
Wal dhabbiin uumamtee
heeraaf seera murtuu
Sumaa itti salphata
kan olola ooftu.
Nuti tokkoo bari
nu diiguu hin gaabbinii!
Nama if sirreeseet
Nama ifii gorfameet
deebi’ii nu gorsii
Gorsaafin siif himee
kunoo sitti gabaa
Yoo didde ammoo beeki
sumaat itti gaabbaa
Kan bahaa fi dhihaa
kan kaabaa fi kiibbaa
Tokko ta’uu beekii
dhiisi mee kijiba.
Tags Najiib Zannuun omn walaloo
Next Life & Legacy of a Borana Statesman